Ukukhusela Intellectual Property Amalungelo kwi-China - Abaqondisi-mthetho ka-China. Zonke Isitshayina abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
Ukukhusela Intellectual Property Amalungelo kwi-China
Kwi phezulu wonke umntu ke uluhlu imingeni, kwaye isihloko ndinguye wabuza malunga ezininzi imibuzo, ngumbuzo njani inkampani unako ukusikhusela iteknoloji nayo ubangela ukuba eli lizweXa zidibene kunye nokungabikho isemthethweni ukunyanzeliswa, lo mba ukukhusela intellectual property amalungelo (IPR) ingaba omnye wemiceli-hurdle kuba uninzi iinkampani woloyiso xa ukucinga angena China kwimakethi. Phambi addressing ngokubanzi imiba, mna kuwazisa ukuba kukho ngezixhobo ezahlukeneyo iindlela ukukhusela iteknoloji kwi-China. Akukho namnye, kunjalo, ingaba foolproof, kodwa ethabatha ezithile precautions unako substantially lessen umngcipheko. Umzekelo, ucwangcisa ngokupheleleyo owned langaphandle inkampani apho kunokwenzeka ukuba manufacture imveliso, kunokuba ungena kwi edibeneyo nokulinga, sichaza ngakumbi ulawulo phezu othe ufikelelo iteknoloji nokwazi-njani.
France lezemveliso inkqubo kwi-eziliqela ezizimeleyo imisebenzi ukuba zibekwe khona ngendlela ezahlukeneyo kumaziko unako kuthintela nawuphi na omnye iqela labasebenzi ukususela ekubeni yonke inkqubo.
Enye indlela elungileyo ukunqanda iteknoloji leakage kukuba manufacture ngakumbi iinxenye, apho kakhulu le-technology ngu equlethwe, kwi-ndlu, kunokuba outsourcing. Ngaphaya enzima iziphakamiso, zimbini imiba ngokubanzi okokuba mna nyusa Kuqala, ndiyabuza ukuba inkampani ingaba ngenene afford hayi ukuzisa layo iimveliso kwi-China. Okwesibini, mna emphasize ukuba China ngu evolving kwi-technology kunye nokuyila, kwaye ukuba ibonelele komlinganiselo ka-ithemba kuba bonke iteknoloji abanini-mhlaba. Ngalo isicelo ka-umhlobo, mna wathetha malunga ne-China nge-CEO ye dollazi amathandathu ezigidi, U.S. umzi-mveliso specialty engineering izixhobo aliqela eminyaka eyadlulayo. Xa mna wabiza wonyulwa ngokuhlwa ukusuka wam ekhaya kwi-Beirut, i-CEO wandixelela ukuba inkampani yakhe kokuba ngaphezu a amahlanu ipesenti abathengi e-United States kwaye kokuba iqalile ndibona olomeleleyo inzala yakhe iimveliso kwi-China. I company kokuba hired iarhente, Isitshayina wesizwe, ukuphuhlisa yentengiso, kwaye yenkampani kumazwe angaphandle iintengiso ukuba China baba lokukhula isiphumo. I-CEO babefuna wam uluvo lwakhe malunga nokuba umele begin ukucinga ucwangcisa nemizi-mveliso ziko kwi-China. Phambi ndinga impendulo, ndaba umbuzo."Kangakanani ucinga yakho ingeniso ithuba kungenzeka ukuba manufactured kwi-China."Ngqo ngaphandle, wathi,"ndicinga ukuba singenza kangangoko dollazi amashumi amane million ngonyaka."Kokuva ukuba, icebiso lam waba gca."Ukuba ummandla wentengiso ukuba omkhulu kwi-China bemveliso yakho, nawe nento yokuba ngcono qala ngokulima apha,"ndabaxelela kuye.
Mna ke waya kwi zichaza."Imveliso yakho ngu-a basebenza-intensive, abahlanganisene imveliso.
Kunye ezibanzi zezothutho kwaye imisebenzi, aphesheya ixabiso sele pretty phezulu. Kwaye zinikwe obukhulu basebenza umxholo, kukho plenty ka-igumbi kuba Isitshayina inkampani ukuba imigca ethe engineer yakho imveliso kwaye ngalo kuya kuba elikhulu yaba ngaphantsi."Lowo ngoko nangoko wabona incopho kwaye wavuma, kodwa mna akusebenzi khange iselwa kwenzeka."Yokulahla iintengiso kwi-China ayi yakho wemiceli-ingxaki ukuba wena musa qala nemizi-mveliso apha,"mna idityaniswe."Njani ixesha elide ucinga kuzakuba phambi yakho Isitshayina competitors begin ukuba iliso kwindawo yentengiso, kwaye abo emfundo ephakamileyo amaxabiso, e-United States. Ukuba ufuna musa fumana apha, yakho amahlanu ipesenti abathengi ekhaya ayikwazi kanjalo kuba jeopardy."Needless ukuthi, eli yaba sobering wayecinga ukuba athe hadn khange mbasa. Cwaka kusenokuba deafening ngamanye amaxesha, kwaye zonke ndeva waba cwaka kwi-ezinye end ye-imfonomfono. Ndaba nje bamxelela ukuba, ngeendlela ezininzi, isigqibo manufacture kwi-China kokuba ngokubanzi iziphumo zemisebenzi yokufama ngaphezu kokuba ndabona. Njengoko i-CEO ye-company, lowo kufuneka worry malunga kakhulu ngaphezu nje udibanisa ababonisi base ubungakanani China kwimakethi. Elizayo viability yakhe inkampani babe kakuhle kakhulu kuba semngciphekweni ukuba yena kodwa kuza ukumisela phezulu-shop kweli lizwe. I-CEO waba inobabalo kwaye ibulele kum ekupheleni incoko yethu, kodwa ndiza ukuqinisekisa ukuba ndino ruined imini yakhe. Kwayena lo name ajongene nayo yonke inkampani ukuba wenze okulungileyo iteknoloji kwaye enkulu abathengi ngaphandle China namhlanje. Ukuba inkampani akuthethi ukuba bafunde ukuba compete kunye yayo upcoming competitors kwi-China, sibe kamsinya kuba battling ezi efanayo iinkampani kwi eyakhe turf. Endala name adage ukuba eyona nkqo ekukhuseleni ilungelo yindlela elungileyo offense sele plenty lokwenza isicelo apha. Kukho okwesibini, ngakumbi hopeful, incopho ukuba ndiya kusoloko ukwenza kwaye oko kukuthi ukuba China ngu-ukutshintsha. A Thomson Reuters uphando ingxelo, eyabhengezwa kwisaziso kweyomnga, yabonisa ukuba China waba ihlabathi ke phezulu patent filer ngo, surpassing-United States kwaye Japan njengoko eli lizwe amanyathelo phezulu ukwenza inguqulelo entsha ukuphucula yayo intellectual property amalungelo ingoma mbali. Ingxelo wathi ukuba eli lizwe ke imbono wayeza tshintsha ngokwayo ukusuka"zenziwe kwi-Chinayenzelwe kwi-China"yentengiso, kunye urhulumente pushing kuba ukwenza inguqulelo entsha kwi-thengisa ezifana automobiles, pharmaceuticals neteknoloji. Ingxelo wathi ukuze ipapashwe patent izicelo kwi-China baba kulindeleke ukuba iyonke phantse, ngowama, yalandelwa-United States kunye ekuthatheni, ne-Japan ne-phantse. Ipapashwe izicelo kwi-China ke patent-ofisi kuba risen nge-i-average ka ezisixhenxe ipesenti ngonyaka ukususela, kwi- ukuya phantse, ngo, i-nzulu yabonisa. Njengoko ukubonelelwa Isitshayina iinkampani kuba patent holders, baya ke kuba vested inzala kwi-ukukhusela zabo iteknoloji, ngolohlobo zabo ngamazwe counterparts. Ngaphezu nawuphi na omnye umbandela, oku trend uya drive ikamva IPR umyalelo wokhuselo kwi-China.
China izandla-Microsoft yolawulo kakuhle phezu-Xbox nokulinga Yi-Reuters
Chinese Ture, Shanghai Rōia Ratonga, China Law Firm